Mpanamboatra masinina KF94 | Masinina sy mpamatsy masinina China KF94
KF94 (karazana ravina willow) masinina mandeha ho azy masinina dia milina mandeha ho azy tanteraka amin'ny famokarana sarontava KF94. Mampiasà teknolojia ultrônônika izy io mba hampifamatotra ny lamba tsy misy tenona PP sy ireo fitaovana sivana, ary hokapaina ny vatan'ny sarontava mifanaraka amin'ny akora ampiasaina. Ny sarontava dia afaka mahatratra fenitra samihafa. Ny earloop dia lamba elastika tsy misy tenona, izay mahatonga ny sofin'ilay mitondra aina mahazo aina sy tsy misy fihenjanana. Ny sosona lamba sivana sarontava dia misy vokany tsara amin'ny sivana, izay mifanentana tanteraka amin'ny tarehy aziatika.
1.It dia mandray ny famokarana miompana, ny masinina manontolo dia fandidiana mandeha ho azy, tsotra sy haingana, olona iray ihany no mila miasa ity masinina ity.
2. Kely habe izy io ary tsy mitana toerana malalaka. Izy io dia mandray rafitra firafitra alimina, tsara tarehy sy mafy orina.
3. Fanaraha-maso fandaharana PLC, diplaomatika avo lenta, fitadiavana foto-elektrika ny akora, hisorohana ny lesoka, hampihena ny fako.
4. Miaraka amina fanaraha-maso mampiady saina ara-batana, fisaka ny fisakafoanana ary tsy ketrona, ny haben'ny vokatra dia marina, tsara tarehy ny tonon-tsolika, miaraka amin'ny varingarina SMC, valizy solenoid, bobongolo firaka titanium, fahombiazana maharitra sy avo lenta.
5. Ny tsipika famokarana iray manontolo dia manan-tsaina indrindra, izay afaka mampihena be ny isan'ny mpandraharaha. Izy io dia manana haitao mandroso, rafitra mirindra, asa azo antoka, fampandehanana mety ary fahombiazan'ny famokarana avo.